सावधान ! तपाई पनि सुपारी खानुहुन्छ ? हेर्नुहोस एक पटक (भिडियो)
काठमान्डौ: पारम्परिक र सांस्कृतिक हिसाबले सुपारी नेपाली समाजको अभिन्न अंग हो । पाहुनालाई सगुनको रूपमा सुपारी दिएर सम्मान गरिन्छ भने निम्तो गर्न सुपारी चाहिन्छ भन्ने चलन अद्यापि छँदैंछ । पुजाआजामा त सुपारी नभैहुँदैन । तर, यही सुपारी हानिकारक र रोग लगाउने अम्मल पनि हो । अचेल यसको व्यवसायिकता र प्रयोग दिनदिदैं बढ्दै गएको छ । त्यसो हुनुमा यसको अम्मल लगाउने बैगुन मुख्य कारण हो ।
स्वास्थ्यका लागि हानिकारक : सुपारी तथा सुपारीजन्य पदार्थको सेवनबाट उत्पन्न हुने मुखका समस्यामा दा“त खिईने, स–साना चिरामार्फत् रसभित्र पसेर दा“तको रंग परिवर्तन हुने, दाग बस्ने, टुक्रा परी भा“ँचिने र खस्रो हुने, खोकी लाग्ने, मुख खोल्न कठीन हुने, पोल्ने, मसला र पीरो खान नसक्ने, गालाको भित्री भागमा एक वा दुवैतिर सेतो–खैरो दाग देखिनेलगायत हुन्छ । त्यसपछि ओरल सबम्युकस फाईब्रोसीस भएर अन्त्यमा मुखको अर्बुद रोगसम्म हुन सक्छ ।
के हो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ? : यो एउटा दीर्घकालिन रोग हो, जसले मुखको कुनै भाग वा कहिलेकाहीं गला नलीमा असर गर्छ । यो कहिलेकाही बिबिराबाट सुरु हुन्छ र ‘इपीथेलीयम’ भन्दा मुनिको भागमा सुजन भएर ‘लेमाइना प्रोपाइरा’ कठोर हुन्छ । ‘इपीथेलीयम’ पातलो भएर मुखको छाला कठोर हुन्छ । मुख खोल्न र खान नसक्ने हुन्छ । सबभन्दा पहिले भारतीय मुलका दक्षिण अफ्रिकी महिलामा देखिएको विश्वास गरिएको यो रोग मुख्यतः भारतीयमा देखिने गरेको छ ।
Exclusive – मध्यरातमा अस्पताल भित्र पुग्दा फिलिपको दर्दानक अवस्था, क्रिस्टिना आईन मिडियामा (हेर्नुहोस् भिडियो)
वास्तु शास्त्र अनुसार यसो गर्दा मानिसहरुको बढ्छन् शत्रुहरु